ठुलो समस्या र चुनौती भनेकै सरकार बदलिने बितिकै पहिलाका नियम पनि बदलिदिन्छ : डा. गोपीलाल न्यौपाने - Today Express
in अन्तरवार्ता, अर्थ र वाणिज्य, कार्टून, खेलकूद, जनकपुर विशेष, जीवनशैली, टिभी कार्यक्रम, ताजा समाचार, मनोरञ्जन, रेडियो कार्यक्रम, साहीत्य, सूचना प्रविधि, होमपेज
काठमाडौँ १३ साउन ।। काठमाडौँ को बसुन्धरामा २०५८ सालमा स्थापना भएको एक्टिभ एकेडेमि कलेज जसले नर्सरीदेखि मास्टर सम्मको आध्यन-अध्यापन गराउदै आएको छ । उक्त कलेजको बारेमा सम्बादाता प्रीति जिसीले कलेजका प्रधानाध्यापक डा. गोपीलाल न्यौपाने ज्युसंग गरेको कुराकानी ।
प्रिती– कृपया यो एक्टिभ एकेडेमि कलेजको छोटो परिचय दिनुहोस् न ?
एक्टिभ एकेडेमि कलेजको २०५८ सालमा स्थापना भएको हो। HSCBत्यतिखेर मानविकी र ब्याबस्थापन विषय जोड दिदै ११ र १२ मात्र राख्यौ पछी कानुन र विज्ञान विषय पनि राखियो र २०६० सालदेखि बी एड ,बी यस डबलु ,बी ए विषय पनि राख्यौ र २ वर्षा पछी मास्टर सोसलोजी पनि राख्यौ अर्को २ बर्ष पछी एम ए राजनीति शास्त्र पनि संचालनमा ल्याइयो यस कलेजमा नर्सरीदेखि मास्टर सम्मको पढाई हुन्छ ।
प्रिती – यो कलेजले अहिले सम्म गरेका उपलब्धिको बारेमा के भन्नु हुन्छ ?
यो शैक्षिक संस्था भएकोले ४५०० जना विद्यार्थीहरुले +२ उत्रिण गरिसकेका छन् भने ३००० विद्यार्थीहरुले स्नातक तह र ७०० जनाले मास्टर उत्रिण गरिसकेका छन्। यसलाई स्वभाबिक उपलब्धिको रुपमा लिन चाहन्छु ।
केहि विद्यार्थीहरुलेहरुले इन्टर्नेशनल कम्पनीमा सेवा दिदै आईरहेका छन्। केहि उच्च सचिव र सह- सचिवको रुपमा कामगर्न सफल भएका छन्। ,र बिभिन् सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थामा थुप्प्रैको संस्ख्यामा काम गर्न सफल भएका छन्।
यी तख्यांकलाई हेर्नेहो भने यस एक्टिभ एकेडेमिले राष्ट्रलाई निक्कै ठुलो योगदान गरेको छ भन्ने लाग्छ
प्रिती – कलेजमा आफ्नो पद ,जिम्वेवारी र योगदानको बारेमा एकै शब्द मा बताईदिनु हुन्छकी ?
२०५८ सालमा स्थापना भएको एक्टिभ एकेडेमि कलेज ४ जना विद्यार्थीहरु बाट सुरु गरेको थियौ । अहिले १६०० विद्यार्थीहरु पढ्दैछन् यस कलेजको को प्रमुख भएको हिसाबले हेर्ने हो भने यसलाई ठुलो उपलब्धिको रुपमा लिएको छु।
प्रिती – कलेजको भाबी योजना के छ ?
यस संस्थाले आउदो वर्ष देखि M.PHILL चलाउने योजना लिएको छ । तेस्को लागि तयारी गर्दै छौं र अबका दिनहरुमा विद्यार्थीहरुमा अझ गुणस्तरिय सिक्षा प्रधान गर्न लागि रहेका छौं बिशेष गरि बजारमुखी र प्रयोगात्मक सिक्षालाई जोड दिने गरि अगाडी बढदै छौं ।
प्रिती – यो शैक्षिक क्षेत्रमा के कस्ता समस्या,चुनौती छन् र कसले के गर्दा राम्रो हुन्छ? तपाइको विचारमा बताउनु होस् ?
शैक्षिक संस्था मा सबै भन्दा ठुलो समस्या र चुनौती भनेकै सरकारले फिक्स नियम ल्याउदैन सरकार बदलिने बितिकै पहिलाका नियम पनि बदलिदिन्छ सरकारले शैक्षिक क्षत्रमा राजनीति नगरे हुन्थ्यो । आजको विद्यार्थीहरु भोलिको फाउण्डर र पिल्लर हुन् नेपालभरी सबै स्कुल कलेजका विद्यार्थीहरु ले एकै विषयको कन्टेन पाउछन फरक कन्टेन पाउदैनन। नेपाल भौगोलिकताको हिसाबले हिमाल पहाड र तराई मिलेर बलेको छ तर सिक्षा भने सबै ठाउमा एकै नासको पढ्दा मेनपावर पनि एकै नासको निस्कने भयो हिमाललाई चाहिने मेनपावर फरक होला ,पहाडलाई चाहिने मेनपावर फरक होला,तराइलाई चाहिने मेनपावर फरक होला,पुर्बलाई चाहिने मेनपावर फरक होला, र पश्चिमलाई चाहिने मेनपावर फरक होला। तेसैले मेनपावर र अभावलाई आजको सिक्षाले पूर्ति गर्न शक्दैन यो कुरा शैक्षिक क्षत्रकै ठुलो चुनौती हो ।
प्रिती – यो क्षेत्रमा भएका सम्भावना वा राम्रा पक्ष तपाइको विचार मा के के छन् ?
शैक्षिक क्षेत्र निक्कै सम्भावना भएको क्षेत्र हो नेपालमा त झन् धरै सम्भाबना छ । एक बर्षमा लगभग १३०० देखि १४०० डाक्टर नेपालमा उत्पादन हुन्छन । यसले नेपालको आबास्यकता मा पनि सहयोग पुर्याउछ र अर्को तर्फ हेर्ने हो भने नेपाली विधार्थीले बाहिर गएर पनि सर्भिस दिन सक्छन। भारतमा बर्सको ६० हजार डाक्टर उत्पादन हुन्छन त्यहाँ १३ लाखले निवेदन दिन्छन ।यदि भारतमा डाक्टर पढ्न चाहनेलाई नेपालमा ल्याउन सकियो भने बिदेसी रकम भित्रिन सक्छ।
तेस्तै इन्जिनियर को पनि निक्कै सम्भाबना छ। हाम्रो देशमा साचैनै टेक्नोलोजी वा विकाश निर्माणको काम गर्न धरै बाकी छ ।
बन्द हर्ताल नभई स्थिर सरकार र ल्याइएका राम्रा नीति र योजनलाई निरन्तरता दिने हो भने शैक्षिक क्षेत्रमा राम्रो सम्भाना छ ।
प्रिती – आफ्ना ग्राहक वा सेवा ग्राहीलाई के भन्न चाहनु हुन्छ ?
विद्यार्थीहरु, अभिभाबक,शिक्षक हामी एउटै परिवर हौ। विद्यार्थीहरु क्रिएटिभ,अनुसासित ,प्रतिस्पर्धी ,र अनुसासित भएर अघिबढ्ने हो भने सफलता टाढा छैन। शिक्षकले पनि प्रतिस्पर्धी विद्यार्थी तयार हुनुपर्यो । जसले गर्दा शिक्षक, अभिभाबक र विद्यालय सबैको हित हुन्छ बजारमा बिक्ने विद्यार्थी उत्पादन गर्न हामीलाई सबैको साथ चाहिन्छ र सबैको साथको अपेक्क्षा गर्दछौ ।
प्रिती – कार्यक्रम मार्फत के संदेश दिन चाहनुहुन्छ ?
सैक्षिक संस्थामा जोजो लागेका छन् तिनीहरुले असल क्रिएटिभ,अनुसासित,प्रतिस्पर्धी , विद्यार्थी विद्यार्थीहरु उत्पादन गरुन र काम प्रति विश्वास गर्नेहोभने यही देसमा पनि प्रसस्त सम्भाबना छ र सम्भाबनाको खोजिगर्ने र ती सम्भाबनालाई क्याच गर्नसक्ने विद्यार्थीको उत्पादन गरुन भन्ने मेरो आग्रह छ ।
प्रिती – हस्त समय र सम्बादको लागि हजुरलाई धरै धरै धन्याबाद
यो अवसर दिनुभएकोमा डर्बीखबर डटकम् र प्रिती जी तपाइलाई मेरो व्यक्तिगत र एक्टिभ एकेडेमिको तर्फबाट धरै धरै धन्यबाद।
प्रदेश २ उच्च जोखिममा, आठमध्ये धनुषा सहित छ जिल्ला ‘रेड जोन’मा,समस्या ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ र परीक्षण दर अत्यन्तै थोरै
आज १३ आश्विन २०७६ सोमवार तपाइको जन्म कुण्डली अनुसार भाग्यफल
प्रदेश २ लगायत देशै भरी कक्षा १२ को परीक्षा दशैँ अगावै हुने,परीक्षा सञ्चालन गरिनु पर्ने विषयमा छलफल
प्रदेश २ को धनुषामा २९ गरि थप १९६ जना कोरोना संक्रमित,कहाँ कति संक्रमित ? (तथ्यांक सहित)